Dib-udejin - UNHCR Egypt
Laga soo bilaabo Juun 2020, UNHCR waxay qabaneysay wareysiyo Dib udejin iyadoo si fog fog ugu maraysa muuqaal / taleefan oo loogu talagalay qaxootiga doonaya oo awoodaan inay inay wareysi ku sameeyaan xaaladaha ku habboon, aamin ah iyo qarsoon. Qaxootigu waxay hubin karaan oo xaqiijin karaan ballamahooda wareysiga fog fog iyagoo la xiriiraya Khadka telefonka .
UNHCR waxay billowday in ay ku qaabisho tiro kooban oo qaxooti ah xafiisyadeeda sida soo socota:
Qaxootiga wareysiyadooda laga qaaday si fog fog waxaa lasiiyaa balan si ay u imaadaan xafiiska UNHCR (Qaahira 6 Oktoobar ama Askaandriya) si loo hubiyo xaqiijin ugu dambeysa kahor intaan kiiskooda dib udejinta la dhameystirin
Qaxootiga aan wareysigooda lagu qaadi karin si fog fog. UNHCR waxa ay si shaqsi ah ula xiriiri doontaa codsadeyaasha si ay ugu qabato ballamaha dib u dejinta iyo xaqiijinta. Suurtagal ma ahan in la codsado ballan dib u dejin.
Sidee ayey saamaynaysaa kiiskayga dib-udejinta?
Inta lagu jiro muddadan UNHCR ma awoodo inay sameyso wareysiyo dib udejin; si kastaba ha haatee, UNHCR waxa ay kala soo xiriiri kartaa taleefan si ay kuugu soo gudbiso wixii ku cusub xaaladdaada shaqsiyeed. Fadlan hubi in aad siisay UNHCR lambarka taleefan ee aad haysato.
Hada ma muuqato wax muujinaya in barnaamijyada dib udejinta la baajin doono, si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inuu dib u dhac dheer ku yimaado ka hor inta qaxootiga dacwadooda loo gudbiyay dal dib u dajineed aysan wareysan masuuliyiinta wadankaasi. Haddii mar hore uu ku wareystay dal dib udejin ah, go’aanka kiiskaaga ayaa qaadan kara muddo ka dheer sida caadiga aha.
Waxaa jira joojin kumeel gaar ah oo ku saabsan dhammaan qaabaynta safarka ee qaxootiga u safraya dalalkii bixiyay in dib u dejin. Lama oga inta dib loo dhigi doono safarrada dib udajinta. Haddii laguu aqbalay dib udejin, UNHCR ama IOM ayaa kula soo xiriiri doona sida ugu dhakhsiyaha badan ee suurtogalka ah inay safarkaaga diyaariyaan.
Dhammaan adeegyada ay bixiyaan UNHCR iyo IOM waa lacag la’aan. Haddii lagaa codsado in aad lacag ku bixiso safarka ama caawinaadda, fadlan isla markiiba ogeysii UNHCR.